ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းအားလုံးအချမ်းတုန်လာတယ်နှင့်ညွင္းခဲ့ကြကြောင်း coursing သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအစောပိုင်းနေ့ရက်ကာလ၌၊အခါအဆိုပါစာသားအခြေခံပြီးလိင်ဂိမ်းများအုပ်ချုပ်? ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၊လက်ရှိကျနော်တို့ resurrecting လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူအဆိုပါစာသားအခြေခံပြီးလိင်ဂိမ်းများအတြင္း! ယခု၊ကျနော်တို့ပို့နှစ်ခုအများဆုံးချီးမျိုးအစားဂိမ်းသို့တစ်ခုမှာကြီးမားသောနှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ ပူးပေါင်းပြီးအသစ်ရှာဖွေ universes စေသင့်ကြောင်းစိတ်ပြေးအခမဲ့နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တန်ဖိုးအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းစာပေဂိမ္း။ အသစ်ဖော်စာသားနဲ့လိင်အခြေခံကဒီမှာ။, သငျသညျတှေ့ကွုံလိမ့်မည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုအသစ်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊နှစ်ခုမှတ်မိခံစားချက်။ သိသိသာသာအရေအတွက်ကိုစာသားအခြေခံအားကစားပြိုင်ပွဲတင်ပြကြသည်ဖြစ်ပုံပြင်များနှင့်အတူသူရဲကောင်းများ၊သားရဲနှင့်မင်းသ။ လက်ရှိကျွန်တော်တို့အလားတူပုံပြင်မောင်းနှင်ထွင်း၊အလားတူ uncanny ခံစားချက်ကိုသေးနှင့်အတူတစ်ဦးအလှည့်! ထိုသားရဲများ၊နိုက်နှင့်မင်းသမီးများမှာယခုပူဇာတ်ကောင်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များနှင့်သူတို့ကြောဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး! ကြဖို့အတိုက်ခံရပေါင်းစပ်နှင့်အတူလိင်ရွေ့၊ပည္ဆိုင္ရာရိုက်ချက်နှင့်ညည်း၏အပျော်အပါး!, အားလုံးဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းစီစဉ်ထား immaculately မွှေဖို့အားလုံးအရေးပါသောရှုထောင့်၊ကိုရောက်စေဖို့ကစားသမားအကောင်းဆုံးသဘာဝ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွေ့လျော်စိတ်ကူး။
ရှိပါတယ်ကြီးမားသောပမာဏ၏ဂိမ်းအဘို့အသီးအသီးလိုအပ်နှင့်အလွန်ခွဲခြားဖို့သင်ကူညီရှာဖွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်း။ သင်ရိုက်ထည့်တဲ့ဘုံ၏အံ့သြဖွယ်အပျော်နှင့်အတူအလှန်အစာအခြေခံအပြုအမူ။ သင်အမျိုးအစားအတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်အစာ၊မဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ပုံမှန်နှစ်ဦး၊သို့မဟုတ်သုံးဦးအရည်အချင်း။ ဒီကိုမှန်ကန်စေသည်သောအရာ၏ဤဌန်အားကစားပြိုင်ပွဲလုံးဝအခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားကတည်းကသင်သည်အဘယ်သို့အမျိုးအစားဇာတ်ကောင်ထားကြသည်။, ဥပမာအားဖြင့်၊ဖြစ်အပျက်အတွက်သင်အမိန့်အကျင့်စရိုက်ဘဲ၊အနက်ရောင်ချယ်နှင့်အပြစ်သွေးကြောကောလိပ်ကကျော်မျက်နှာကို၊ကပြုပါမည်ဟုသောကြောင့်အပြစ်ကင်းစင်! အလားအလာရလဒ်များကိုကြီးမားသောဖြစ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့်အောင်စာသားအခြေခံပြီးဂိမ်း၏အရှင်။ သင်နိုင်ရန်အဆက်အသွယ်ရှာ၊ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊နမ်းခြင်း၊ကန်၊နှိပ်စက်ခြင်း၊ဆွဲသို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုး၏လှုပ်ရှားမှုအသင်စဉ်းစားရုံဖြင့်စာရိုက်။ ညှဉ်း၊ကျေနပ်အောင်၊စည်းကမ်းဂိမ်းအဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြည့်ရှုကျန်းဖြစ်လာထောင်ထဲကဘုရားသခင်၌စစ်မှန်သောခံစားချက်ကိုစကားလုံး။, အပေါ်အခွင့်အလမ်းသည်ဤအကြောင်းအဆိပ်သင့်၊ဤအစုအဝေးစိတ်ကိုဥေညစ်ညမ်းစာပေဂိမ်းများစေမည်သင်ကမှတဆင့်သွားကြဖို့တာရှည်လမ်းပိုင်း၏အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေး unfathomable စိုစွတ်သော။
အမှန်ပင်၊တစ်ဖွဲ့လုံးကအခြားကမ္ဘာမှကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုများထက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့်စာသား! ဆည်းတစ်လျှောက်သူတို့အားဝိသေသလက္ခဏာများတွေ့ထားပြီးဆောင်တစ်ဦးထက်ပိုကောင်းအစဉ်အမြဲမီးမောင်းထိုးပြ။ ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်အကြောင်းအတိတ်နှစ် impeccably။ အခါတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုး၏လှုပ်ရှားမှုကယ့်ကို၊တီးဖြစ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကရလိမျ့မညျကိုသွားရုံရှေ့မှာသင့်မျက်စိ။ ရှိပါတယ်မျှအခြားလိင်၊ပိုကောင်းထက်အမြင်အာရုံ။, ဤသူလိုင်းများတလျှောက်၊ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊အနားမှာဇာတ်လမ်းနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလှန်မည်၊အတွေ့အကြုံထိပ်တန်းအရည်အသွေးလိင်မြင်ကွင်းနှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ပညာရှိစေပါလိမ့်မယ်သင်အမှန်တကယ်ပည္ဆိုင္ရာအစာရှောင်ခြင်း။ အဆိုပါဂိမ်းရည်ရွယ်တင်ပြဖို့၊ကစားသမား၊ခံစားချက်နှင့်များစွာနှင့်ပြည့်စုံအံ့သြဖွယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလာတယ်။ အဆိုပါရင်းနှီးသောအချိန်လေးအတွက်အဲဒီမှာဂိမ်းတွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်ကိုအပေါ်၎င်းတို့၏ရှုပ်ထွေးသောသဘာဝကြောင့်၊ကစားသမားကိုယ်တိုင်အမိန့်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာထောင်ထဲကဘုရားအစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်လိင်ကမ္ဘာမှာမရှိ။, တစ်ခုလုံးကိုအဆင်တူ၏ဂိမ်းများမရှိပို့လိုက်ကြတယ်သို့မဟုတ်ပေါ်လာပါတယ်ည့္ခ်ိန္အထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဒီသစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အပြည့်အဝ!
စာသားအခြေခံပြီးလိင်ဂိမ်းများလက်ဖောင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အတော်လေးအချို့အမျိုးအစားကွောငျးကစားသမားတွေအမှန်တကယ်သိကြ၏အရသာ။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲလွင်သည်သိသာထင်ရှားပြင်တွင်အံ့သြဖွယ်အခြေမရှိဘဲ၊မည်သည့်အားနည်းချက်များနှင့်မလျှော့၊အစဉ်အဆက်! ဒီနောက်ဆက်တွဲဂၤါအံ့သြစေပါလိမ့်မယ်သင်နှင့်အတူ၎င်း၏အနုယန္တရားနှင့်ဧကန်အမှန်မှအယူခံမဆိုအမျိုးအစားကစားသမား။ သေး၊အလေးအနက်မပေါ်ချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်သင်သည်အသစ်များ၏ဤအမျိုးဂိမ်းများ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကဖန်ဆင်းဒါကြောင့်နားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသော၊ထည့်သွင်းရိုးရှင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်များ၊ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့်အတွက်မိနစ်။, အဆိုပါဂိမ်းစုဆောင်းအသုံးချ၊၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ဖစ္ၿ၊ရည်ရွယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဿုံအားလုံးအပေါ်လက်ရှိပလက်ဖောင်း။ ဤသူလိုင်းများတလျှောက်၊မည်သို့ပင်သင်ရှိမရှိ၏တစ်အသုံးပြုနေဘုတ္မ်ား၊တက်ဘလက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း၊စိတ်မပူပါနဲ့၊ကျွန်တော်သင်ဖုံးလွှမ်း။ ဒီလိုမျိုးအညမ်း၊လိင်ဂိမ်းများစားသမားပေးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမစစ်မှန်သောအသင်းနှင့်အတူအဖြစ်မှန်ဖော်လျက်ရှိသည်။
ရိုက်ထည့်ရန်ဂိမ်းအဖြစ်၊သင်ပင်မသိကြဖို့လိုအပ်ဝင်မည်၊သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအကြောင်းနားလည်။ သင်ရိုးရိုးလေးကစားနှင့်ပြုရမည်။ ကောက်သင့်ရဲ့ဂိမ်း၊တစ်ဦးဇာတ်ကောင်နှင့်သတိထားပါသို့သင့်ရဲ့လမ်းဒီစာသားအခြေခံပြီးလိင်နက်။ ဒါ့အပြင်၊အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားအဖြစ်လုံခြုံရေးနှင့်ကိုယ်ရေးအလာပထမဦးဆုံး၊အဖြစ်သာယာဝမွေ့လျော်ငါတို့၏ကစားသမားနှင့်အရေးအပါဆုံး။ လည်းရှိပါတယ်ရပ်ရွာလွယ်တကူချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေ၊သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်အသစ်ဖြစ်စေအပေါင်းအဘော်၊အကူအညီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်၊အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်၊ဝက်အူအသီးအသီးအခြားဂိမ်းအတွက်၊သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ပြင်ပ။, အပျက်အတွက်မဟုတ်သေးသိပ္သေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၊ဒီမှာအဖမ်း! တစ်လျှောက်အစုအဝေး၏ပေါ်လွင်နှင့်ကောင်းကျိုးဖော်ယခုတိုင်အောင်၊ဤလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့! ဘူးပင်လိုအပ်မှဝင်မည်အပေါ်ချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်သငျတို့မကြိုက်တတ်တဲ့မယ်လို့မှ၊ရိုးရှင်းစွာပဲထိကစားဆိုရာက္ဇာနှင့်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ခြင်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အကျိုးအတွက်ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အမြင်သင့်ရဲ့အနက်ရှိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကျေနပ်!
ကိုယ့်စုံတွဲတစ်တွဲအချိန်လေးအပေါ်အဆိုပါစာသားအခြေခံပြီးလိင်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသင်ခံရလိမ့်မည် snared အဘို့အကောင်း! မင်း၊စစ်တိုက်ရိုက်၊လွှမ်းမိုးနှင့်ပည္ဆိုင္ရာအဖြစ်အများကြီးငျလိုခငျြအဖြစ်! ကြိုးစားအားထုတ်မှုစေမစွဲရ။ စတင်သင့်သွားလာစူးစမ်းအားလုံးသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ!